ताजा अपडेट : देउवाको अग्रता जारी, ४१ सय मतगणना गर्दा कसको कति मत ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
ताजा अपडेट : देउवाको अग्रता जारी, ४१ सय मतगणना गर्दा कसको कति मत ?
प्रारम्भिक मतगणनाअनुसार सभापतिका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवाले सुरुवाती अग्रता बनाएका छन् भने शेखर कोइराला पछिपछि रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । ४१८५ मत गन्दा देउवाले २५०१ मत ल्याउँदा शेखरले १६३० मत पाएका छन् । एक मत बदर भएको छ ।